Fatana gazy: inona avy ireo, toetra, fahombiazana ary fiarovana | Green Renewable
Portillo Alemanina | | Trano maintso
Rehefa tonga ny ririnina ary manomboka manafika ny tranontsika ny sery, iray amin'ireo fomba tsy ahazoana aina antsika izao amin'ny hafanana tsara dia ireo fatana. Misy karazana fatana isan-karazany miaraka amin'ny tombony sy fatiantoka entiny. Androany isika dia hiresaka fatana fatana. Io no iray izay matetika ampiasaina ao an-trano ary, na dia efa noheverina nandritra ny fotoana ela aza fa mampidi-doza kokoa izy ireo satria manana ny fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny famoahana afo sy solika, nandritra ny taona maro dia nohatsaraina ny fiarovana sy ny fahombiazany.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny fatana fatana sy ny toetrany.
1 Fatana lasantsy taratra
2 Milamina ve ny fatana?
3 Ahoana ny fomba hanazavana ny fatana fatana
4 Tsara kokoa ve ny fatana solitany na solitany?
Fatana lasantsy taratra
Ny fatana gazy dia be mpampiasa ao an-trano mba hanome hafanana amin'ny andro mangatsiaka indrindra. Noheverina ho mampidi-doza kokoa izy ireo noho ny haintrano sy ny fivoahan'ny entona. Na izany aza, nandritra ny taona maro, nanatsara ny fiarovana sy ny fahombiazany izy ireo.
Rehefa misafidy karazana fatana etona tianao apetraka ao an-tranonao ianao dia manontany tena ianao hoe iza amin'ireo no tsara indrindra. Zava-dehibe ny fiheveranao ny efitrano hametrahanao azy. Tokony hanana rivotra tsara izy io, satria ny fatana mandany oksizenina avy amin'ny tontolo iainana.
Miasa toy izao ny fatana lasantsy taratra. Izy ireo dia manana mpandoro infrared avo lenta izay mahatonga azy ireo hanana hery lehibe kokoa. Izy ireo dia afaka mahatratra hatramin'ny 4.000 W, hahafahan'izy ireo manafana efitrano lehibe kokoa eo anelanelan'ny 25 sy 35 metatra toradroa. Satria matanjaka kokoa izy ireo dia mila apetraka ao anaty efitrano misy rivotra madio. Matetika mandany entona 300 grama eo ho eo isan'ora. Rehefa dinihina fa varingarina entona misy 12,5 kg ary ny mora indrindra misy dia tsy lafo velively. Toroana hevitra mba hialana amin'ny ankizy izany.
Ny fatana entona mamirapiratra matetika dia afangaro amin'ny hafa toy ny lelafo sy catalytic sy catalytic. Na izany aza, tsy mitovy ny fandehany. Ny fatana catalytic dia mampiasa tontonana catalytic izay tsy mampiasa afo mivantana. Ireo fatana ireo dia asaina kokoa raha manan-janaka ao an-trano ianao.
Etsy ankilany, ny lelafo manga dia miasa amin'ny alàlan'ny fifanolanana. Mirehitra amin'ny hafanana avo kokoa ny entona, izay misy fanjifana solika ambany kokoa sy famoahana hafanana avo kokoa. Manana fiainana mahasoa kokoa izy ireo noho ny fatana fandrehitra hafa
Amin'ity fampahalalana ity dia azonao antoka fa tsy hikorontana bebe kokoa amin'ireo karazana fatana.
Milamina ve ny fatana?
Tahaka ireo heaters habakabaka rehetra ireo, misy atahorana ny fatana gazy. Mety hampidi-doza izy ireo raha tsy ampiasaina tsara sy am-pitandremana. Mba hisorohana ny toe-javatra mampidi-doza dia tsy maintsy:
Aza mampiasa ny fatana fandrehitra amin'ny efitra fandroana na efitrano fatoriana.
Aza mampifandray azy ireo amin'ny efitrano kely loatra (tokotokony ho 3,5 metatra toradroa), satria, amin'ny fihinanana ny rivotra manodidina azy, dia atahorana ho sempotra isika.
Raha mihoatra ny 4650W ny herinaratra, ny efitrano tsy maintsy manana amin'ny fotoana rehetra fihodinan'ny rivotra.
Soso-kevitra ny hamono azy ireo raha matory ianao.
Aza mitahiry varingarina misy tahiry ao ambanin'ny tany.
Zava-dehibe ny mamela elanelana azo antoka eo anelanelan'ny fatana sy ny mety ho zavatra mora mirehitra toy ny fanaka sy seza.
Aza manarona azy miaraka amin'ny akanjo amin'ny toe-javatra tsy misy.
Raha lasa masaka loatra ny rivotra dia sokafy ny varavarankely mandritra ny 10 minitra hanavaozana ny rivotra.
Ny vovoka no fahavalonao ratsy indrindra. Mandritra ny vanin-taona mafana dia tsara ny manarona azy ireo hisorohana azy ireo tsy hanangona vovoka, satria mety hampidi-doza izany ary hihena ny zava-bitany.
Mba hampitomboana ny fiarovana anao, nandritra ny taona maro, ny fatana fatana dia nanatsara ny asany tamin'ny rafitra fiarovana izay miasa toy izao:
Manana rafitra izay izy ireo tapaho ny lasantsy sao maty ny lelafo. Amin'izany no hialantsika amin'ny fanapoizinana entona.
Raha voaloto be ny rivotra iainana dia tapaka ho azy ny famoahana entona. Raha ambany oksizenina ny atmosfera na maloto ilay mandoro dia hiteraka mandritra ny fandoroana ny karbonina monoxide. Entona misy poizina izy io, noho izany dia hialana amin'ny toe-javatra io ny fatana.
Raha tsy mandeha ny rafitra fiarovana dia tsy mandeha ihany koa ny fatana. Noho izany, azo antoka izy ireo.
Ahoana ny fomba hanazavana ny fatana fatana
Betsaka ny olona manana fanontaniana ny amin'ny fomba hanazavana tsara ny fatana fandoroana gasikara hialana amin'ny loza. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manokatra ny valizy mpandrindra tsindry varingarina. Ny bokotra mpandamina dia tokony tsindriana 20 segondra eo ho eo ary mihodina amin'ny toerana avo indrindra. Na dia mitazona ny fanaraha-maso aza isika, dia manindry imbetsaka amin'ny bokotra piezoelectric mba hanazavana ny lelan'ny mpanamory. Rehefa mirehitra ny lelafo dia tsara kokoa ny mitazona ny knob mandritra ny segondra vitsy ary avoaka tsikelikely.
Raha aorian'ny fandrehitra ny lelafo mpanamory ary mamoaka ny bokotra mpandrindra dia maty izy, satria efa lany ny tavoahangy. Raha toa ka tsy mirehitra ny lelafo dia mety ho tapaka ny bokotra piezoelektrika na nanangona vovoka izy.
Zava-dehibe ny tsy hamindrana ny fatana fandrehitra raha vao velomina, raha tsy maintsy afindrao dia tsara kokoa ny mamono azy ary miandry minitra vitsivitsy vao milamina ny gazy ao anaty tavoahangy. Atao io mba hisorohana ny fipoahan'ny gazy.
Tsara kokoa ve ny fatana solitany na solitany?
Ny fatana kerosena dia ampiasaina amin'ny toe-javatra izay ilana fampidirana kalorific tena haingana, toy ny any amin'ny efi-trano sy lalantsara lehibe. Faritra toa ny tranom-panjakana, izay idiran'ny onjan-drivotra hatrany amin'ny varavarana misokatra sy mihidy. Izany dia mahatonga azy isaky ny manavao ny rivotra dia miditra mangatsiaka indray.
Ho an'ireo karazana toe-javatra ireo dia mety tsara ny fatana solitany, satria manome hafanana ao anatin'ny fotoana fohy. Izy io koa dia tsara ho an'ny toerana toy ny lakaly, atrikasa, mezzanine ary lakaly ho an'ny fampiasana an-trano.
Ny tombony lehibe ho azy dia izany tsy atahorana hipoaka na ho may izy io. Ho fanampin'izany, mora entina izy ireo, tsy mila fametrahana na fikojakojana, lafo ary mangina. Ny kerosene na paraffin dia solika azo avy amin'ny solika ary mora vidy. Na izany aza, mamoaka fofona mety misy poizina izy ireo rehefa mivadika sy maty. Mavesatra loatra koa ny tontolo iainana, ka vetivety dia mila rivotra izy io ary hiditra indray ny hatsiaka.
Tsy toa an'io karazan-fatana io, fatana entona tsy dia mavesatra loatra ny tontolo iainana ary milamina kokoa izy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ho famaranana, raha mila hafanana bebe kokoa ianao amin'ny toerana misy rivotra maharitra amin'ny alàlan'ny varavarana misokatra sy mihidy, ny safidy tsara indrindra dia ny solitany. Mifanohitra amin'izany no izy, raha mila hafanana amin'ny toerana milamina sy mihidy ianao dia tsara kokoa ny an'ny gazy.
Amin'ity fampahalalana ity dia hanana mazava kokoa ny zava-drehetra momba ny fatana fatana sy ny fiasan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Fatana gazy